Naasaha Yaryar ee Yurub 157cm TPE Galmada Doll Simona
Tel: +1 (412) 215 6480
Log in / Saxiix
Dooro Language English Deutsch Español 日本語 Português Italiano Français Pусский العربية Türkçe 한국어 ไทย Afrikaans Shqip አማርኛ Հայերեն luqadda Azerbaijan Euskara Беларуская мова বাংলা Bosanski Български Catala Sugbaano Jicewa 简体 中文 繁體 中文 Corsi Hrvatski Čeština Danish Nederlands Isberento Eesti Filibiin Suomi frysk Galego ქართული Ελληνικά ગુજરાતી Kreyol ayisyen adag Hause Ōlelo Hawai'i עִבְרִית हिन्दी Hmong Magyar Íslenska Igbo Bahasa Indonesia Gaelige Basa Jawa ಕನ್ನಡ Қазақ тілі ភាសាខ្មែរ كوردی Кыргызча ພາ ສາ ລາວ Laatiin valoda Latviešu Lietuvių kalba Lëtzebuergesch Македонски јазик malagasy Bahasa Melayu മലയാളം Malta Māori Te Reo मराठी Монгол ဗမာ စာ नेपाली Norsk norsk پښتو فارسی polski ਪੰਜਾਬੀ Romana Samoan Gàidhlig Српски језик sesooto Shona سنڌي සිංහල slovenčina Slovenščina Afsoomaal ah Basa Sunda Kiswahili Swedish Тоҷикӣ தமிழ் తెలుగు Українська اردو O'zbekcha SomGoal rss Cymraeg isiXhosa יידיש Yoruba Zulu
Bogga ugu weyn (Hadda)
Dolls Galmo Jinsi ah
Dolls Sex Sex Dolls
Ka dukaameysto Brand
6 YAR Doll Doll Dabka Dhismaha Dollhouse 168 Sanhui Doll XY Doll Bezlya Dolls Caruusadaha Qita Dollada Futuregirl Doll AXB Caruusadaha Piper WM Dolls Doltech Irontech
Maskaxda Khaanadaha Khaanadaha lagu keydiyo Miskaha Doll Sex
Dolls Galmo Jinsi ah,Caruusadaha qaabka yurubiyanka ah,Naasaha waaweyn caruusadaha galmada,B koob caruusadaha galmada,Caruusadaha galmada caato ah,Doollar Jecel
157CM Arday B Koob Naas TPE Waslad Doll Simona
Save 26% $ 1,958.02 $ 1,451.00
Midabka Maqaarka: *
Midabka indhaha : *
Siilka Loogu Sameeyay Si joogto ah ayaa loogu beeray caruusadda. Gelinta xubinta taranka dumarka waxaa ka mid ah gacmo dhaqaajin kara si loo fududeeyo nadiifinta. Muuqaalka kuma kala duwana.
Timaha Pubic: *
Midabka Labia: *
Labia Madoow oo Madoow
Labia Biraw Light
Midabka Ciddiyaha: *
Manicure Faransiis ah oo qaawan
Manicure Faransiis casaan ah
Xulashada Cagaha: *
Xulashada cagaha taagan waxay u oggolaaneysaa caruusadda inay si madax bannaan u istaagto. Saddex madax bool yar ayaa ka fidiya sagxadda cagta si ay u xasiliso.
Sanduuqa xirxira: *
Kartoonka (+ $ 0)
Wadarta Ugu Dambeysa
❤ Buste x1 | Gacmo gashi x1 | Wareegyada x1 | Shanlooyinka x1
❤ Dharka doll x1 | Qalabka nadiifinta x1 | Kul kululeeyaha x1
Waqtiga dirida: qiyaastii 1-2 toddobaad. | Baakad qarsoodi ah
Dolls Dolls iyo Covid-19: Khatarta Khatarta ah ee Gudbinta
Daryeelka & Dayactirka
Macluumaadka Wax soo Saarka
Sheekada taariikh nololeedka Simona:
Simona waa arday sanadka koowaad ee jaamacadda ah. Waxay leedahay timo timo dhaadheer oo dhaadheer oo jaalle ah, indho madow iyo bushimo, bushimo qoyan. Waxaa laga arki karaa muraayadaha madaxa lagu xirayo inay ku wanaagsan tahay waxbarashada. Waxay ku fiican tahay xisaabta iyo fiisigiska, waxayna haysataa daqiiqad ay ku xisaabiso xoogga isku dhufashada saddexda god leh, iyo buundooyinka farshaxanka ee cilmiga ah oo aad u qanci waayey. Riyada mustaqbalka waa milkiilaha rootida ama barista ama qareenka.
Shakhsiyaddeedu way ka farxad badan tahay, laakiin wax yar oo yar oo taxaddar la'aan ah ayaa jirta. Waxay jeceshahay in dadka kale loogu yeero walaasheed. Markay maqasho ereyada "walaasheed", xitaa haddii ay hurdo badan tahay oo xitaa saacadda digniinta ah aysan soo jeedin, isla markiiba way fuulaysaa. Sababtoo ah magaaladeedu waa roodhida, xamaasadda samaynta roodhidu way ka xoog badan tahay qof kasta, oo rootiga ayaa lagu darayaa liiska. Laakiin marka lagu daro rootiga, kuma fiicni saxamada kale, markaan sameeyo maraq miso ah, hooyaday aad baa loo xanibay.
Liiska xirxirida Simona:
1 * JINSIGA DOLL
BILAASH 1 WIXII INDHO AH
BILAASH 1 WIGS ＆ 1 COMBS
BILAASH 1 PAIRS JACAYLKA
BILAASH 1 DHARASHO DOLL
BILAASH 1 NADIIFINTA
BILAASH 1 SARIIR kululaynta
Dhererka ： 61.8 inji (157cm)
Miisaan ： 63.9 lbs (29kg)
UstDayaanna ： 26.8 inji (68cm)
Dhexda ： 18.5 inji (47cm)
Miskaha ： 30.3 inji (77cm)
Dhererka gacanta: 19.7 inji （50cm）
Dhererka cagaha: 8.7 inji （22cm）
Size xirxirida: 57.1*16.6*11.9 inches(145*42*30cm)
QUULASHADA GALMADAADA DOLL
Ls Jinsiga caruusadaha jirka waa in si fiican loo nadiifiyaa 30 maalmood kasta qubayska ama qubayska iyadoo la adeegsanayo saabuun fudud oo ka hortagga jeermiska ah.
❤ Way fiicantahay inad dolladaada dhex fadhiisatid biyo ama aad la qubaysatid, laakiin yaan madaxeeda ama qoorteeda u quusin biyaha hoostooda.
Si aad u dhaqdo caruusadaha galmadaada wejiga, si tartiib ah ugu tirtir maro qoyan iyo saabuunta lidka ku ah bakteeriyada. * Mar labaad, Ha ku quusin boombalooyinkaaga madaxa biyaha.
❤ Isticmaal shukumaan jilicsan oo jilicsan oo si tartiib ah u salaax boombalahaaga galmada ka dib markaad nadiifiso kadib.
Thoroughly Markaad si fiican u qalajiso ka dib, mari boodh khafiif ah oo budada cusboonaysiinta ah buraashka ku jira si maqaarku u noqdo mid jilicsan oo jilicsan.
❤ Marna ha u isticmaalin qalajiye timo ama ilo kale oo kuleyl ah si aad u qarxiso caruusaddaada.
❤ Si aad u nadiifiso timaha caruusadahaaga, ka saar wiggeeda madaxeeda oo ku nadiifi shamaca shaambo fudud iyo qaboojiyaha. Wig ha u qalasho si dabiici ah (adoo isticmaalaya wig istaag haday suuro gal tahay) ka dibna si tartiib ah shanlaha timaha uga bilow salka hoose una sii soco kor.
Waxaan kugula talineynaa in cinjirka loo isticmaalo caruusadaada si looga fogaado koritaanka bakteeriyada.
Galmada siilka, galmada dabada iyo kanaalka nadiifinta
Siilka, futada iyo aagga godka afka waa in la nadiifiyaa ka dib isticmaal kasta oo koritaanka bakteeriyada ah, maxaa yeelay maqaarka TPE ayaa ka jilicsan silica. Ku biyo raaci biyo saabuun leh oo ka hortaga bakteeriyada oo ku jirta waraabiyaha bamka yar ilaa ay si fiican u nadiifiso, ka dibna kanaalka ku biyo raaci biyo nadiif ah farriinta hoosta haweenka ilaa inta laga saarayo dhamaan saabuunta. Si fiican u qalaji kanaalka. Ku nadiifi boodhka boodhka qalalan gudaha iyo dibaddaba.
Daryeelka maqaarka iyo dharka
Nadiifinta Haddii maqaarku noqdo mid dhegdheg leh, nadiifinta iyo qallajinta ka dib, si tartiib ah ugu fududee caruusadda doll ama budada ilmaha oo qalaji si maqaarkiisu u noqdo mid jilicsan oo siman. Tani waa mid aad muhiim u ah in laga hortago jeexitaanka caruusadaha galmada. Fadlan taxaddar si aad u hubiso in dhar kasta oo lagu dhejiyo boombalaha uusan midab beddelmi doonin. TPE waa mid aad u jilicsan, oo midabada mugdiga ah ama mugdiga ah ayaa laga yaabaa inay dhiig baxaan oo ay u keenaan midab jilicsan caruusadda, taas oo xitaa adag tahay ama aan macquul aheyn in laga saaro. Ka taxaddar inaadan dul dhigin caruusadaha galmada ama waxyaabaha ay ku jiraan khadku, sida joornaalada, joornaalada, maaddooyinka mugdiga ah ama waxyaabaha maqaarka ah oo ay sidoo kale ku jiraan midabbo saliid ku milmi kara. Ha u kashifin caruusadaha galmada si toos ah iftiinka qoraxda si looga hortago gabowga qalabka TPE.
Markaad ka dalbaneyso urdolls.com, waxaad heli doontaa emayl xaqiijin ah. Marka amarkaaga la raro, waxaa laguu soo diri doonaa emaylka macluumaadka raadraaca ee dalabkaaga. Waxaad ka dooran kartaa habka aad u rabto maraakiibta bogga Macluumaadka Amarka inta lagu jiro nidaamka iibsiga.
Wadarta waqtiga ay qaadaneyso in la helo amarkaaga ayaa lagu muujiyey hoos:
Wadarta waqtiga gaarsiinta waxaa la xisaabinayaa laga bilaabo waqtiga amarkaaga la dhigo ilaa waqtiga laguu keenayo. Wadarta waqtiga dhalmada ayaa loo kala jabiyay waqtiga ka shaqeynta iyo waqtiga rarka.
Waqtiga hawsha: Waqtiga ay qaadanayso si loo diyaariyo sheygaaga si aad uga soo rarto bakhaarkeena. Tan waxaa ka mid ah diyaarinta alaabtaada, sameynta jeegag tayo leh, iyo xirxirida rarka.
Waqtiga rarka: Waqtiga alaabtaada (sheyadaada) aad uga soo leexan laheyd bakhaarkayaga ilaa halka aad ku socoto.
Urdolls waxay bixisaa qaababka maraakiibta caalamiga ah ee soo socda:
Ku soo rar alaabada gaadiidka xirfadleyda lagu kalsoon yahay ee dunidu caanka ku tahay (DHL / UPS).
Hoos Kadhagasho Raadi Dhamaan Kataloogyada
Miskaha Doll Sex
Caruusadaha qaabka yurubiyanka ah
Jinsiyadaha jinsiga ee Japan
Naasaha waaweyn caruusadaha galmada
Caruus galmo fidsan oo jilicsan
Caruusadaha galmada labka ah
Caruusadaha galmada smart
Caruusadaha galmada Anime
Robot caruusadaha galmada
Jinsiga caruusadda galmada
Caruusadaha galmada madow
BBW caruusadaha galmada
Caruusadaha galmada uurka leh
Caruusadaha galmada caato ah
Dameeraha galmada dameerka yar
Dhexdhexaad caruusadaha galmada dameerka ah
Dameerro jinsi dameer weyn
Ciyaaraha galmada dameerka weyn
Xaasaska Dutch Dutch
Khaanadaha Khaanadaha lagu keydiyo
Koob caruusadaha galmada ah
B koob caruusadaha galmada
C cup caruusadaha galmada
D koobabka caruusadaha galmada
E koob caruusadaha galmada
F koob caruusadaha galmada
G koob caruusadaha galmada
WM 145cm caruusad jinsi ah
WM 148cm caruusad jinsi ah
WM 158cm caruusad jinsi ah
WM 161cm caruusad jinsi ah
WM 163cm caruusad jinsi ah
WM 165cm caruusad jinsi ah
WM 166cm caruusad jinsi ah
WM 168cm caruusad jinsi ah
Dollhouse 168 145cm doll jinsi
Dollhouse 168 146cm doll jinsi
Dollhouse 168 150cm doll jinsi
Dollhouse 168 155cm doll jinsi
Dollhouse 168 156cm doll jinsi
Dollhouse 168 158cm doll jinsi
Dollhouse 168 160cm doll jinsi
Dollhouse 168 161cm doll jinsi
Dollhouse 168 165cm doll jinsi
Raadi by Brands
Dhismaha Dollhouse 168
Gabdhaha galmada loo yaqaan 'sex dolls' waxay soo mareen baaritaanno taxaddar leh iyo hubin tayo leh, marka waad ogtahay inaad adigu kaliya raadineysid caruusadaha galmada ugu tayada fiican adduunka, iyadoo aan loo eegin waxaad raadineyso, waan la kulmi karnaa shuruudahaaga.
Waxaan gacanta ku hubin doonnaa amar kasta oo si taxaddar leh ayaan ku hubin doonaa wax kasta oo shakhsi ahaan ah adiga oo emayl ah, markaa haddii aan u maleyno inuu jiro qalad, waan hubin doonnaa waxaadna heli doontaa fursad labaad oo aad ku cusbooneysiiso ama aad ku beddesho maskaxdaada. Haddii aadan hubin wax uun, weydii oo keliya, marwalba waan ku faraxsanahay inaan ku caawinno. Waxaan ku siin karnaa caawimaad midab maqaarka ah, waxaan ku tusi karnaa sawirrada warshadda, ama waxaan ku siin karnaa hagitaan maamuus leh oo kaa caawinaya inaad doorato doll jacaylka kuugu habboon.
Waxaan ku siineynaa maraakiibta adduunka oo dhan lacag la'aan dhammaan caruusadaha galmada.
Canshuuraha + Canshuuraha:
Dhammaan canshuuraha iyo khidmadaha kastamka waxaa lagu darayaa sicirka waana daryeeli doonaa annaga. (Iibsadayaasha alaabta ka qaata Kanada iyo Switzerland waxay u baahan yihiin inay kaligood ku dhammaystiraan nadiifinta kastamka)
Dhamaan caruusadaha galmada, ma jiraan khidmado qarsoon mana jiraan lacago dheeraad ah.
Dhammaan waddamada / gobollada ay caruusadaha sharciga ahi sharci ka yihiin ayaa loo diri karaa iyada oo lacag la'aan ah.
Dhamaan caruusadaha galmada waxay ku jiraan 100% baako kala duwan.
Caruusadda galmada waxay ku dhex jirtaa sanduuq khafiif ah oo bunni ah oo aan lahayn astaan
Warqadaha ama xambaarahu ma oga waxa sanduuqa ku jira.
Urdolls waayo-aragnimada caruusadda galmada:
1. Dooro caruusadda aad ugu jeceshahay noocyadeena buuxa ee caruusadaha galmada sare.
2. Habee caruusaddaada. Ikhtiyaarrada caruusadaha galmada ee gaarka ah. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, fadlan la xiriir.
Ku soco iibsiga.
3. Dalbo xaqiijin. Ka dib iibsiga, waxaad heli doontaa xaqiijin amar isla markiiba, oo waxaan kula soo xiriiri doonaa 24 saac gudahood si aan gacanta ugu xaqiijinno in dhammaan faahfaahinta ay sax yihiin oo aan hubinno in su'aalaha kale laga jawaabo. (Haddii aadan helin e-maylka xaqiijinta, fadlan hubi spam-kaaga. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, fadlan la xiriir.)
4. Been abuur. U soo qaado caruusaddaada galmada. Farshaxankeena istuudiyaha wuxuu bilaabay howsha samaynta caruusadaha gacanta.
5. Aqoon Isweydaarsi: Ka dib diyaarinta caruusadaha, waxaad heli doontaa sawirro warshad si aad u xaqiijiso dhammaan muuqaalada. Waxaa laga yaabaa in caruusaddaadu u baahan tahay xoogaa hagaajinno ah, timo kala jaban, indho kala duwan, wax dhib ah haba yaraatee.
6. Shixnad iyo Gaarsiin. Kadib markaad hesho oo aad xaqiijiso in sawirrada wershadda caruusadda ay hagaagsan yihiin, caruusadda waa la geyn karaa oo la geyn karaa gurigaaga cusub-gurigaaga! Waxaan bixinnaa dhammaan kharashyada dhoofinta iyo khidmadaha banaynta kastamka ee macaamiisha dhammaan waddammada.
7. Lambarka raad Raaca: Waxaad heli doontaa nambarka raadraaca oo aad awood u yeelan kartaa inaad sameysatid taariikh cayiman oo aruurinta / geynta si toos ah shirkaddayada dirista. Fedex + UPS.
8. Gaarsiinta: Boombaladaadii ayaa timid. Ku raaxeyso, waan ognahay in laga yaabo inaan maalmo kaa maqalno maxaa yeelay waxaad noqon doontaa mashquul badan, laakiin haddii aad noo baahato, fadlan nala soo xiriir.
(Laga soo bilaabo iibsashada ilaa helitaanka caruusadda galmada, celceliska waqtiga waa qiyaastii 3-4 toddobaad, iyadoo kuxiran goobtaada.)
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan farriin noogu reeb ama nala soo xiriir chat live-ka waana kaa caawin doonnaa.
Macaamiisha Iibsaday Doobkan Jinsiga ah Ayaa Iyana Iibsaday
Setlla - 148CM Naaso Waaweyn Maqaarka Maqaarka TPE ee Doll Doll
Ballanqaadkeenna: ❤ Dhammaan alaabooyinka caruusadaha galmada lagu geeyo waa lacag la’aan. Ma jiraan ajuuro qarsoon. Sanduuq gaar ah oo loogu talagalay kaydinta iyo daabulidda caruusadaha galmada. Kuwa kale uma aqoonsan karaan inay tahay doll ka baxsan - ilaalinaysa arimahaaga gaarka ah. Dol caruusadahayaga dhabta ahi waxay ka samaysan yihiin badbaado iyo sun aan ...
Monica - Ciyaaraha Dadka Waaweyn 2 Madadaalo Hole Iyadoo Aan Laheyn Anime Sex Do ...
❤ Iyada oo loo marayo 3D tunnel texture gudaha iyo waxyaabo super-laastik ah, waxay soo saari kartaa xoog xoog leh oo raaxo leh, dareemeysa sida haweeney dhab ah. Ka samaysan walxaha TPR, qaabku waa jilicsan yahay, jilicsan yahay, maqaar u roon yahay oo aan lahayn ur. Product Badeecadani waa taxane laba kanaal ah, oo qaabkoodana looga daydo b ...
Gaskell - 150CM B-koob Soo jiidasho leh Maqaar-Midab Maqaarka TPE Jinsiga Doll
Michelson - 160CM B-cup Japanese Style Maqaarka Cadaanka TPE ee Doll Doll
Agatha - 150CM D-koob Qaab Yurub ah oo Qaali ah Maqaarka TPE Jinsi D ...
Joanne - 165CM Boob weyn WM NO.314 Madaxa Dabeecadda Dabeecadda TPE Anime Se ...
Cai Bin - 160cm Kuuriya Anchor Live Jirka Live TPE Doll Doll
❤ Iyada oo ku saleysan jirka nool ee barroosinka Kuuriya Cai Bin. Ka samaysan waxyaabo macquul ah oo macquul ah oo TPE ah, dareemo aad u macquul ah. Ammaan ah oo waara. Muuqaalka malaa'igta, waji qurxoon iyo wajiyo qurxoon ayaa soo jiidasho leh. Material Maado aamin ah: 100% aamin ah, n sun ku jirta oo aan dhadhan lahayn. Packaging Baakadaha gaarka loo leeyahay iyo 100% caqliga: ...
Ogeysiiska caruusadaha dhabta ah ee galmada
Sidee loo daryeelaa caruusadaha galmada?
Imisa sano ayaa loo isticmaali karaa caruusadaha urdolls waxay kuxirantahay xaalada isticmaalka iyo daryeelka. Caruusadaha galmada ee badanaa la isticmaalo lana dhaqaaqo waxay u nugul yahiin inay xidhaan oo ay jeexmaan. Waxaan fahansanahay in caruusadaada galmada ay tahay maalgashi, sidaa darteed waxaan diyaarinay talooyin dhowr ah si aan u ilaalino tayada iyo nolosha galmadaada galmada ...
Sida Loo Helo Bilaash jilicsan Free
Magaca Dhacdada: Soo iibso caruusadaha nooca Doll4ever oo hel waqti jilicsan oo jilicsan Waqtiga Waxqabadka: 2020.05.12 - 2020.05.31 Waxqabadyada: Laga bilaabo Maajo 12, 2020 ilaa Maajo 31, 2020. Iibso doll4ever nooc kasta oo ku yaal dukaanka urdolls. Waxaad heli kartaa laab kale oo jilicsan. Alaabada Dhacdooyinka: Doll4ever noocyada caruusadaha ee Dukaanka Urdolls Doll4e ...
Maalinta Caddaaladda Waxay Iibsataa 12% Dheeraad ah Dhamaan Alaabada Caruurta Galmada
Magaca Dhacdada: Lacagta Maalinta Cad Cad Waqtiga waxqabadka: 2020.03.04 - 2020.03.14 Koodhka Kuuboonada: DA12 Qiime dhimis: Dheeraad ah 12% XADGUDUB Xaddidan: Dhammaan Waxyaabaha ku jira Hababka Ka-qaybgalka Bakhaarka ee Urdolls: 1. Dooro caruusadda galmada aad ugu jeceshahay dukaanka urdolls-ka. 2. Ku dar caruusada gaadhiga wax iibsiga oo guji si aad u isticmaasho t ...
Urdolls waxay bixisaa 100% caruusado jinsi cusub oo tayo sare leh oo qiimo jaban leh. Waxaan nahay xirfad bixiye caruusad jinsi soo iibiya, falsafadeena ayaa ah inaan horumarino oo soo saarno caruusadaha galmada ee nolosha. Keen khibrada ugu fiican macaamiisha. Waxaan kuu balanqaadeynaa inaan kaa qancino.
Telefoonka: + 1 (412) 215 6480
Ragga Lab jinsi
Anime Doll Doll
Xuquuqda hantida aqooneed